प्रावधान आयोग भनेको के हो? वित्तीय लिङ्कमा परिभाषा
सुरु ऋण wiki प्रतिबद्धता शुल्क
1 तैनाती आयोग के हो?
2 यो प्रावधान आयोगमा आउँछ?
3 किन प्रतिबद्धता शुल्क भुक्तानी गरिन्छ?
4 जब एक प्रतिबद्धता चासो हुनेछ?
5 गणना आधार
6 निर्माण ऋण खाताको लागि प्रावधान गरिँदै
7 के यो कर उद्देश्यको लागि प्रावधान आयोग कटौती गर्न सम्भव छ?
तैनाती आयोग के हो?
der प्रतिबद्धता शुल्क (पनि तम्तयार चासो भनिन्छ) शुल्क हो कि एक ऋणदाता निर्माण ऋण को लावारिस भागहरुमा चार्ज गर्न सक्छ। यसको कारण यो छ कि यस समयमा प्रदान गरिएको पैसाले कुनै मुनाफा ल्याउँदैन, यो अन्तमा निश्चित छ।
यो प्रावधान आयोगमा आउँछ?
त्यहाँ धेरै परिस्थितिहरू छन् कि उधारकर्तालाई थाहा छ कि त्यो एक ऋण को चाँडै चाहिन्छ, तर समय राम्रो तरिकाले परिभाषित छैन। यस प्रकारको ऋणलाई कल-अफ ऋण भनिन्छ: पैसा उधारकर्ता द्वारा अप्रत्यक्ष समयमा "बोलाइएको" भनिन्छ, त्यसो गर्न। यो कल्पनायोग्य छ कि उधारकर्ताले आफ्नो सामानको मूल्य वृद्धिको लागि आशा गर्दछ। बैंक प्रावधानको माध्यमबाट खर्च गर्छ, जुन प्रावधान शुल्क प्रयोग गर्न भुक्तानी गर्न सकिन्छ। यदि ऋण तुरुन्तै दावी गरिएको छ भने, बैंकले चाँडै चासो प्राप्त गरेको थियो। ओन-कल ऋणमा दुई अज्ञातहरू छन्: समय प्रयोग गरिन्छ र कुन बैंक ग्राहकलाई ऋण चाहिन्छ। दोस्रो अवस्थामा, बैंक यसको खर्चमा रहनेछ; यसैले, यो ग्राहकहरु बाट प्रावधान आयोग चाहिन्छ। बैंकले प्रदान गरेको बेला तुरुन्तै कल-अफ ऋणको लागि प्रावधान आयोगको गणना गर्दछ।
किन प्रतिबद्धता शुल्क भुक्तानी गरिन्छ?
नियमको रूपमा, घर निर्माण पूरा भएपछि बिलिङ छैन, तर ग्राहकहरूको चरणहरूमा। निर्माण कम्पनीहरू वा शिल्पकारहरूलाई विभिन्न समयमा भुक्तान गर्नुपर्छ। यसैले, उधारकर्ताले अहिले सम्पूर्ण आवश्यकता पर्दैन ऋण रकमतर ऋणका भागहरू चरणहरूमा। नतिजाको रूपमा, ब्याज दरहरू सम्पूर्ण ऋण रकम बुलाउने भन्दा कम छन्। यसरी ऋणदाता आफ्नो ग्राहकहरु को लागि उपलब्ध ऋण को भागहरु राख्छ र अन्यथा यी रकम संग मुनाफा उत्पन्न गर्न सक्दैन। किस्त ब्याजमा थप्दा, उधारकर्ता बैंकको हानि हटाउँदछ। रुचि प्रावधान सामान्यतः तब हुन्छ जब नयाँ सम्पत्तिको निर्माण समयमा पूर्ण गर्न सकिदैन। त्यसैले ऋणदातालाई क्षतिपूर्ति गर्न सकिन्छ कि उसले पुन: प्राप्ति को लागी ऋण को पैसा पहिले नै आफ्नो क्लाइन्ट को लागी सहमत भएको छ।
जब एक प्रतिबद्धता चासो हुनेछ?
एक प्रतिबद्धता चासो चार्ज गरिएको छ चाहे सहमत सहमति ऋणको सर्तहरूमा निर्भर गर्दछ। ब्याजले तुरुन्तै निर्माण ऋणको भुक्तानी परिपक्वताबाट प्राप्त गर्दछ। बैंकले यी ब्याज दरहरूको गणना गर्दछ जब तक ऋण पूर्णतया भनिन्छ। सामान्यतया, उधारकर्ताको समय पूर्व निर्धारित अवधि अवधि हुन्छ जब सम्म शुल्क शुल्क थपिएको छ। PSP चरणले ऋण रकमको आधारमा फरक फरक पार्दछ र एक महिनादेखि2वर्ष सम्म हुन सक्छ। केही बैंकहरू यस सर्भरको लागि कुनै ब्याज अवधि बढाउँछन्, र अरूले कडा रूपमा निर्दिष्ट समय अवधिको अनुपालन गर्छन्। तपाईं प्रावधान मिति बाईपास गर्न सक्नुहुन्छ र ऋण रकम एक समय जम्मा खातामा जब तपाइँ तिर्न को लागी योग्य हुनुभयो आफ्नो लेनदेनसँग सहमत हुनुहुन्छ।
तैनाती ब्याजको स्तर सामान्यतया दुई फरक तरिकाहरू प्रयोग गरी निर्धारण गरिन्छ।
एक। चासो ऋण अंश को आधार मा गणना गरिएको छ जुन तब तक नहीं बुलाया गएको थियो।
ख। ब्याज को प्रावधान सम्पूर्ण ऋण राशि मा चार्ज गरिन्छ।
ब्याज दर सामान्यतया दुई देखि तीन प्रतिशत ऋण को लावारिस भाग र मासिक भुक्तानी गरिन्छ।
निर्माण ऋण खाताको लागि प्रावधान गरिँदै
ग्राहकहरू बन्द गर्नुअघि ऋण सम्झौताको सर्तहरूमा धेरै रूचि हुनुपर्छ। यहाँ, प्रावधान ब्याज को साथ साथै ब्याज-फ्री अवधि को अवधि विशेष खातामा लिइन्छ। प्रतिबद्धता ब्याज सामान्यतया वार्षिक प्रतिशत दर मा शामिल छैन। एक उधारकर्ताको लागि, प्रावधान लागतहरू अतिरिक्त लागतको अर्थ हो जुन खातामा लिन सकिन्छ जब अचल सम्पत्ति कोष र निर्माण ऋण को समापन गर्दा। अक्सर, उधारदाताहरू आपूर्ति रुचि र ब्याज-रहित समयको अवधिमा समायोजन गर्दैछन्। उधारकर्ताले यस प्रकारको कुराकानीको लागि केहि कोठा छ।
के यो कर उद्देश्यको लागि प्रावधान आयोग कटौती गर्न सम्भव छ?
प्रतिबद्धता चासो केवल उधारकर्ता द्वारा कर प्रयोजनों को लागी कटौती गर्न सकिन्छ यदि उनको निर्माण पछि सम्पत्ति मा नहीं रह्छ, तर यो किराए मा बाहिर छ। यदि यो मामला हो भने, लागत प्रावधानहरू उत्पादन लागतको भागको रूपमा खेरिएको छ। तथापि, तिनीहरू विज्ञापन लागत को रूप मा पुन: प्रयास को दावा नहीं गरिन सक्छ।
अघिल्लो लेखरचनात्मक सम्पत्तिको
अर्को लेखउधारो विभाग